“Abidjan Blog Camp” sy ny hetsika “Soraty anaty bilaogy ny fialantsasatrao” · Global Voices teny Malagasy
Lasitra fiofanana iray momba ny fampiasàna ireo media sôsialy
Voadika ny 22 Oktobra 2020 3:56 GMT
Tsy ela akory izay, natomboky ny Abidjan Blog Camps, mpisitraka famatsiambola madiniky ny Rising Voices, ny fanentanana ho fampahafantarana ho an'ireo tanora any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ao Côte d'Ivoire. Herinandro roa no hanaovana ny atrikasa “Soraty ho bilaogy ny fialantsasatrao”. Ny herinandro voalohany, hahazo fanofanana momba ny teknôlôjian'ny fanoratana bilaogy sy ny fanaovana gazetin'olontsotra ireo ankizy. Mandritra ny herinandro faharoa, tsy maintsy manao fikaroham-baovao ry zareo mba hamelomana ny lahatsoratra ho avoakany, izay ho avoaka miaraka ao amin'ny bilaogin-dry zareo manokana sy ny an'ny tetikasa. Mandritra io herinandro faharoa io ry zareo dia hotolorana ihany koa boky iray avy amina Ivoariàna mpanoratra izay ho tsarain-dry zareo. Homena fahafahana mametraka fanontaniana amin'ilay mpanoratra ihany koa izy ireo. Hahazo valisoa izay fitsaràna tsara indrindra.
Sombiny avy amin'ny bilaogy vaovaon'ilay tetikasa:
Ny lohahevitry ny fanazàrana ho an'ireo mpianatra ato aminay dia ny fanoratana lahatsoratra momba ny fialantsasatr'izy ireo rehefa tapitra ny sekoly. Hitantara ny tontolo manodidina azy izy ireo, ny vakiboky nataony, izay nahaliana azy. Hizara ny tantarany, ny saripika sy ireo lahatsary noraketin-dry zareo.
Ny hetsika « Soraty ho bilaogy ny fialantsasatrao » dia tafiditra ao anatin'ny hetsika « AbidjanBlogCamps ». Ny fandaharanasa « AbidjanBlogCamps » dia misy andry lehibe roa ijoroany :
- lasitra fiofanana iray momba ny fampiasàna ireo media sôsialy (bilaogy, podcast, tambajotra sôsialy, sns…), misokatra ho an'ireo fikambanana samihafa, antokon-draharaha, sekoly sy andian-tanora ao amin'ny distrikan'i Abidjan (Côte d’Ivoire).
- bilaogy iray iombonana izay ho toerana fanaovana andrana fampiharana ho an'ireo vondrompiarahamonina isankarazany ho tonga hiofana.
Ireo adolantsento miaina fialantsasatra no ho laharam-pahamehana voalohany ho an'ilay hetsika, noho ny antony roa :
- matetika no tsy zoviana amin'izy ireny intsony ny aterineto, no sady matetika mampiasa izany ry zareo mba hiresahana ny momba azy fotsiny.
- Mpitaridàlana ry zareo ary afaka handrisika ireo ray aman-dreniny ho liana misimisy kokoa amin'ny “web 2.0″.
Asain'ilay lahatsoratra ihany koa ireo mpianatra mba hisoratra anarana maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fandefasana tsotra fotsiny hafatra ho an'ny abidjanblogcamps@gmail.com.
Théophile Kouamouo, filohan'ilay tetikasa, dia nampahafantatra tamin'ny alàlan'ny imailaka tany aloha fa:
Mandrafitra izahay fanentanana nasiônaly iray momba fanoratana bilaogy. Eo andalam-panoratana bokikely iray torolàlana izahay ary hampiasa azy io ho entina mikarakara karazana fanaingan-dresaka ivelan'ny aterineto. Miaraka amin'io bokikely taridàlana io, ho hazavainay amin'ireo mpitarika fikambanana ny lanjan'ny fanoratana bilaogy ary horesenay lahatra ry zareo handefa ny olona ao aminy hanatrika ireo atrikasa ataonay. Hanao resaka ho an'ny gazety ihany koa izahay.
Manantena izahay fa ireny ezaka rehetra ireny dia hahazoana ny isa ilaina avy amin'ireo mpandray anjara mafàna fo.
Ampahafantarin'i Théophile ihany koa fa i Rtoa Nadine Kouamouo, filohan'ny I3C (Information et Communication pour un Changement de Comportement) no handrindra ny fanentanana. Manoratra ihany koa torolàlana iray i Théophile ho an'ireo mpanoratra bilaogy, iarahany miasa amin'i Manasseh Deheer.
Nisy lahatsoratra iray nahaliana tao amin'ny bilaogy Africa2.0 nanoritsoritra ny tsy fahampian'ny fampakàrana lahatsary ho ety anaty aterineto avy any amin'ireo firenena afrikàna (avahana tsy anatin'izany i Afrika Atsimo; Kenya, Maraoka ary Nizerià). Misy lahatsary vitsivitsy momba an'i Afrika any anatin'ireo tranonkala fifampizaràna toy ny youtube, izay ny ankamaroany dia ireo any ampielezana no namahana azy. Omen'ilay bilaogy ny antony:
Tena marina fa vitsy kely ireo lahatsary notontosain'ireo Afrikàna monina ao amin'ny tanibe. Miaraka amin'ireo endri-piainana andavanandro, ireo hetsipanoherana, ireo andiana hatsikana mandeha amin'ny fantsom-pahitalavitra ao an-toerana, azo lazaina fa tsy ny zavatra azo araraotina na ny lohahevitra no tsy misy. Io tsy fahampiana io dia azo hazavaina amin'ny zavamisy hoe vitsy ny afrikàna no manana fakantsary nomerika (cameras) ho entina manatontosa rakitsary, ary na ohatra aza ireo finday sasany manome fahafahana mirakitra zavamiseho amin'ny fiainana andavanandro miaraka amina kailtao azo ihafiana. Sady koa tsy mora ny mampakatra lahatsary iray manana habe 100Mo raha mbola tambajotra milodaka be no mba ananana any amin'ny firenena afrikàna sasantsasany tsy mbola misy fahafahana miditra amin'ilay karazany ADSL. Saingy any amin'ny toerana misy ireo mpisera aterineto afaka mahazo koriana matanjaka, misy fampiasàna mahaliana tsikaritra mipoitra ihany ao amin'ny tanibe ao.
Satria hisy fampianarana mamokatra sy mizara lahatsary ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny “Abidjan Blog camp”, manantena isika fa hahazo valiny sahaza ireo resaka nifanaovana tery ambony.
19 Avrily 2019Afrika Mainty